Itekhnoloji yakutshanje kwizixhobo zesithuthuthu | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda aQinisekileyo | | imoto
Ihlabathi lezithuthuthu litshintsha ngokukhawuleza, kungekuphela nje ngezimbo kunye nobukhulu, kodwa nangokunxulumene nezixhobo zesithuthuthu, ezinje nge moto 125. Namhlanje, ukhuseleko yinto ebaluleke ngakumbi, kwaye Itekhnoloji ikhule kule minyaka idlulileyo. Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi ngetekhnoloji yakutshanje? Qhubeka ufunda!
1 Uninzi lwezixhobo zesithuthuthu zedijithali nezobuchwephesha
2 Iimodeli zeenjini
5 Bamba ngeepropathi ezichasene nokukhaba
6 Ulawulo lokutsalwa kwe-KTRC
7 Hill ukuqala uncedo
8 Itekhnoloji ye-LED
Uninzi lwezixhobo zesithuthuthu zedijithali nezobuchwephesha
Nditsho Ihlabathi lezithuthuthu liguquka ngokukhawuleza, ndingasathethi ke ngetekhnoloji. Ngoku singqina ukuhlangana ngokuthe ngcembe kwezi ndawo zimbini. Sinefayile ye- Ukukhetha okukhulu kwezixhobo zeGPS izithuthuthu, kunye nemisebenzi ekulula ukuyisebenzisa onokuyisebenzisa ngokupheleleyo.
Kodwa kukwakhona ii-intercom ezintle idityaniswe ne-smartphone yakho kunye nomncedisi wayo okrelekrele (USiri okanye uMncedisi kaGoogle), uninzi lwezicelo zokuhamba ezikukhumbuza ngetelemetry yesithuthuthu sakho, njl. Itekhnoloji yenza ubomi bube lula kwaye yenza ukonwabela ukuhamba, awucingi?
Ngenxa yokonyuka kwamandla esizukulwana esitsha se-injini, ulawulo lwee-injini lubalulekile ukulungelelanisa neemeko ezahlukeneyo ezinokufunyanwa xa uqhuba, apho umgangatho wendlela, ubushushu kunye nemozulu zinokuba nefuthe elibonakalayo ekubambeni. U-Kawasaki waba nguvulindlela ukusetyenziswa kweendlela zolawulo.
Iibhayisikile ezingaphantsi kwezemidlalo zinamagophe apheleleyo, asezantsi ibonelela nge-70% yamandla aphezulu kunye nokuhanjiswa kwamandla okuqhubela phambili. Ezi ndlela zimbini ziyafumaneka kwiVersys 1000 kunye neZ1000SX, ngelixa iibhayisekile zemidlalo zinezintathu: ezigqibeleleyo, eziphakathi, nezisezantsi. Oku kuthetha ukuba ungayitshintsha inkangeleko yebhayisekile ngokucofa iqhosha.
Oko uScotsman uJohn Boyd Dunlop enelungelo elilodwa lomenzi kubo ngo-1888, kuninzi okutshintshileyo. Kule minyaka ili-130 idlulileyo, iintlobo ezahlukeneyo zamatayara ziye zaphuhliswa ngokwamacandelo ezithuthuthu ahlukeneyo. Kwaye ndivele Izinto ezinje nge-TPMS (inkqubo yokongamela uxinzelelo lwamavili) ukwazisa abaqhubi ukuba uxinzelelo lwamavili lwabo aluchanekanga.
Ukuba ivili liyajikeleza ngenxa yokuqhekeza kakhulu, indlela ye-antilock braking iyakhaba. Xa iyunithi yolawulo lwesithuthuthu ifumanisa islip sensors yevili, iyanciphisa uxinzelelo lwe-braking ngaphambi kokuba iphinde ibuye. Njengokuba ukuqhawuka kwexesha likaxakeka kuqala, uya kuziva ushukunyiswa kancinane sisinyambisi okanye inyathelo lokuqhekeza. Nge-KIBS, ifayile ye Inkqubo yokuqhobosha i-anti-lock ekrelekrele eyenzelwe ngokukodwa iimodeli zemidlalo zikaKawasaki, uphawu olunokuthi ngokungathandabuzekiyo luye lwathatha inyathelo lokuya phambili.
Qhagamshela iyunithi yolawulo lwesithuthuthu kunye neyunithi yolawulo lwe-ABS ukuze ulawulo lwakho lukwazi ukufikelela kuzo zonke iinkcukacha ezithathwa sisithuthuthu kwaye ungathatha amanyathelo athile.
Bamba ngeepropathi ezichasene nokukhaba
Ithintela ivili langemva ekutshixeni xa ushenxa, ukuthintela iimpembelelo kunye / okanye ukungqubana. Ayisisisombululo sigcinelwe ezona zithuthuthu zikhethekileyo, njengoko kwenzekile nolunye uphuhliso lobuchwephesha kwishishini lezithuthuthu, kodwa lisetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo.
Ulawulo lokutsalwa kwe-KTRC
Ukutsalwa kokutsalwa yenye yezona mpumelelo zibalulekileyo zekhompyuter kwizizukulwana zokugqibela zezithuthuthu. Ngoku ungakhawulezisa ngetekhnoloji efanayo esetyenziswa ngabagibeli beMotoGP. I-Kawasaki iqale nge-KTRC, eza kumanqanaba amathathu ombane kwaye yenzelwe ukubambelela okuphezulu ngokubambelela ngokuqinileyo okanye ukukhusela okuphezulu ngokubamba kancinci.
Olu lawulo lwe-traction luyafumaneka kwi-S-KTRC Sport Edition ye-Z1000SX, iVersys 1000, GTR1400 kunye nesupersport trim. Inezicwangciso ezintathu kwaye isebenzisa itekhnoloji ye-DELTA ukuqikelela isiliphu esingasemva.
Hill ukuqala uncedo
Njengoko bekuxeliwe ngaphambili, ishishini elinamavili amabini lizuze ilifa lenkqubela phambili kwezobuchwephesha eziqale kwishishini leemoto. Enye yazo yile: uncedo lokuqala kwenduli. Eyoyikekayo, akunjalo?
Izibane zangaphambili ziyinxalenye yokhuseleko olusebenzayo lwesithuthuthu kuba lunokuthintela ingozi. Sihambile kwizibane ze-incandescent okanye i-halogen ukuya kwitekhnoloji ye-LED, ethi ibonelela ngendawo ebanzi nengcono yokujonga. Ukongeza, ezinye izithuthuthu zinezibane ezizilungiselelayo. Kwixesha elizayo, ukukhanya kwelaser, okuphinda kabini ukukhanya nokuhlala ixesha elide, kuya kuba yinto eqhelekileyo.
Ucinga ntoni ngenkqubela phambili esele sinayo kwihlabathi lemoto? Ngaphandle kwamathandabuzo, unyaka nonyaka babheja ngaphezulu, baya kusothusa ngantoni kwixesha elizayo? Siza kufumanisa!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » imoto » Itekhnoloji yakutshanje kwizixhobo zesithuthuthu
Amadoda acinga ntoni ngawo?